Meme တိုကျပှဲအပွီး COVID-19 ရနျပုံငှပှေဲ ကစားကွမယျ့ TNC နဲ့ Fnatic – Gaming Noodle
လှနျခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးဝနျးကငျြမှာ SEA Dota2 အသငျးတှဖွေဈတဲ့ Fnatic နဲ့ TNC တို့ (၂) သငျးဟာ အခငျြးခငျြး Meme တှလေုပျပွီး စနောကျခဲ့ကွပါတယျ။ Meme တိုကျပှဲကို စတငျခဲ့သူကတော့ Fnatic Dota2 ပါ။
Fnatic Dota2 ဟာ ဧပွီ (၂) ရကျနမှေ့ာ အောကျပါပုံကိုတငျခဲ့ပွီး ESL One Los Angeles Online ပွိုငျပှဲရဲ့ Direct Invite (၄) သငျးထဲ မပါဝငျခဲ့တဲ့ TNC ကို လှောငျပွောငျခဲ့ပါတယျ။
​TNC ကလညျး Fnatic ရဲ့ တိုကျစဈကို ခကျြခွငျး တုနျ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။ နောကျတဈရကျ ဧပွီ (၃) ရကျနမှေ့ာပဲ အခုလကျရှိ Dota Pro Circuit 2019-2020 မှာ ထိပျဆုံးရောကျနတေဲ့ TNC နဲ့ အဆငျ့ (၁၁) ကို ရောကျရှိနတေဲ့ Fnatic တို့ကို နှိုငျးယှဉျပွပွီး အောကျပါအတိုငျး တုနျ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
ထို့နောကျ Fnatic ကလညျး သူတို့နဲ့ TNC ရဲ့ ခငျမငျမှုဟာ ဆုံးခနျးတိုငျခဲ့ပွီဖွဈပွီး GeekFam ကသာ သူတို့ရဲ့ အကောငျးဆုံး သူငယျခငျြးဖွဈကွောငျး post တငျခဲ့ပါတယျ။
ထို့နောကျမှာတော့ Fnatic က မရပျနိုငျသေးဘဲ TNC ကို နောကျတဈကွိမျရနျစခဲ့ပါသေးတယျ။ TNC ဟာ ၃ ကွိမျမွောကျ Major ကို ရညျရှယျခကျြရှိရှိနဲ့ တမငျရှောငျလှဲခဲ့တာလား? သူတို့ဟာ 4D Chess ကစားနတော ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တဈခြိနျထဲမှာပဲ TNC ဟာ (WeSave! Charity Play ပှဲမှာ) Ana ကို stand-in ချေါယူခဲ့တာတောငျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျဆိုပွီး လှောငျပွောငျခဲ့ပါတယျ။
​ခကျြခွငျးဆိုသလိုပဲ TNC က ပွနျလညျတုနျ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။ Video တဈခုပွုလုပျကာ Fnatic ရဲ့ Facebook Post ကိုသှားရောကျပွီး “Major နိုငျဖူးမှ ငါတို့ကို လာပွောပါ” ဆိုတဲ့ Comment မြိုး ပွနျလညျရေးပွခဲ့ပါတယျ။
Dear Fnatic Dota…
Posted by TNC Pro Team – Dota2 on Saturday,4April 2020
ပရိသတျတှကေတော့ Fnatic နဲ့ TNC တို့ရဲ့ Meme တိုကျပှဲ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမလညျးဆိုပွီး စောငျ့ကွညျ့နတေုနျးမှာပဲ (၂) သငျးလုံးပေါငျးပွီး ကွညောခကျြတဈခုထှကျရှိလာပါတယျ။ ဒါကတော့ လာမယျ့ ဧပွီလ (၁၈) ရကျနမှေ့ာ Fnatic နဲ့ TNC တို့ဟာ Showmatch ယှဉျပွိုငျကစားကွမယျ ဆိုတာပါပဲ။
ပွိုငျပှဲကိုတော့ မွနျမာအခြိနျ ညနေ ၃:၃၀ မှာ စတငျမှာဖွဈပွီး Best-of-five ယှဉျပွိုငျကွမှာပါ။ ပွိုငျပှဲကို ထိုငျး caster “Xyclopz” က cast ပေးမှာဖွဈပွီး COVID-19 တိုကျဖကျြရေးအတှကျလညျး WHO ကိုလညျး လှူဒါနျးနိုငျကွောငျး ရေးသားထားပါတယျ။
အဆိုပါ သရုပျပွပှဲကို စောငျ့ကွညျ့သငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျး တဈခုကတော့ ရိုးရိုး Captain Mode မဟုတျပဲ Reverse Captain Mode (တဈဖကျအသငျးရဲ့ Hero ကို ကိုယျက ရှေးပေးရသလိုမြိုး) နဲ့ဆော့ကွမှာ ဖွဈပါတယျ။
အခုလို COVID-19 ကွောငျ့ အိမျတှငျးအောငျးသူမြားပွားနခြေိနျမှာ ဒီလို ဖြျောဖွမှေုပေးနိုငျမယျ့ Dota2 ပှဲတှေ ရှိနတောကလညျး မင်ျဂလာတဈပါးပါပဲ။ COVID-19 ဖွဈပှားနပေမေယျ့လညျး Gaming Noodle ကနေ သတငျးတှနေဲ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျရာ အကွောငျးအရာအသဈတှကေို တငျဆကျပေးသှားဦးမှာမလို့ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုပေးကွပါ ခငျဗြာ။
Meme တိုက်ပွဲအပြီး COVID-19 ရန်ပုံငွေပွဲ ကစားကြမယ့် TNC နဲ့ Fnatic
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဝန်းကျင်မှာ SEA Dota2 အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Fnatic နဲ့ TNC တို့ (၂) သင်းဟာ အချင်းချင်း Meme တွေလုပ်ပြီး စနောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Meme တိုက်ပွဲကို စတင်ခဲ့သူကတော့ Fnatic Dota2 ပါ။
Fnatic Dota2 ဟာ ဧပြီ (၂) ရက်နေ့မှာ အောက်ပါပုံကိုတင်ခဲ့ပြီး ESL One Los Angeles Online ပြိုင်ပွဲရဲ့ Direct Invite (၄) သင်းထဲ မပါဝင်ခဲ့တဲ့ TNC ကို လှောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။
​TNC ကလည်း Fnatic ရဲ့ တိုက်စစ်ကို ချက်ခြင်း တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ရက် ဧပြီ (၃) ရက်နေ့မှာပဲ အခုလက်ရှိ Dota Pro Circuit 2019-2020 မှာ ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ TNC နဲ့ အဆင့် (၁၁) ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ Fnatic တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြပြီး အောက်ပါအတိုင်း တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် Fnatic ကလည်း သူတို့နဲ့ TNC ရဲ့ ခင်မင်မှုဟာ ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး GeekFam ကသာ သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်း post တင်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ Fnatic က မရပ်နိုင်သေးဘဲ TNC ကို နောက်တစ်ကြိမ်ရန်စခဲ့ပါသေးတယ်။ TNC ဟာ ၃ ကြိမ်မြောက် Major ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ တမင်ရှောင်လွဲခဲ့တာလား? သူတို့ဟာ 4D Chess ကစားနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ TNC ဟာ (WeSave! Charity Play ပွဲမှာ) Ana ကို stand-in ခေါ်ယူခဲ့တာတောင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး လှောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။
​ချက်ခြင်းဆိုသလိုပဲ TNC က ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Video တစ်ခုပြုလုပ်ကာ Fnatic ရဲ့ Facebook Post ကိုသွားရောက်ပြီး “Major နိုင်ဖူးမှ ငါတို့ကို လာပြောပါ” ဆိုတဲ့ Comment မျိုး ပြန်လည်ရေးပြခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ Fnatic နဲ့ TNC တို့ရဲ့ Meme တိုက်ပွဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလည်းဆိုပြီး စောင့်ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ (၂) သင်းလုံးပေါင်းပြီး ကြေညာချက်တစ်ခုထွက်ရှိလာပါတယ်။ ဒါကတော့ လာမယ့် ဧပြီလ (၁၈) ရက်နေ့မှာ Fnatic နဲ့ TNC တို့ဟာ Showmatch ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ် ဆိုတာပါပဲ။
ပြိုင်ပွဲကိုတော့ မြန်မာအချိန် ညနေ ၃:၃၀ မှာ စတင်မှာဖြစ်ပြီး Best-of-five ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။ ပြိုင်ပွဲကို ထိုင်း caster “Xyclopz” က cast ပေးမှာဖြစ်ပြီး COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လည်း WHO ကိုလည်း လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
အဆိုပါ သရုပ်ပြပွဲကို စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခုကတော့ ရိုးရိုး Captain Mode မဟုတ်ပဲ Reverse Captain Mode (တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ Hero ကို ကိုယ်က ရွေးပေးရသလိုမျိုး) နဲ့ဆော့ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို COVID-19 ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းသူများပြားနေချိန်မှာ ဒီလို ဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်မယ့် Dota2 ပွဲတွေ ရှိနေတာကလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ။ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေပေမယ့်လည်း Gaming Noodle ကနေ သတင်းတွေနဲ့ အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာအသစ်တွေကို တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာမလို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါ ခင်ဗျာ။